Doorashada Itoobiya oo Maanta loo dareeray iyo Amniga oo la adkeeyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Doorashada Itoobiya oo Maanta loo dareeray iyo Amniga oo la adkeeyay
Doorashada Itoobiya oo Maanta loo dareeray iyo Amniga oo la adkeeyay
38 million oo qof oo ka mid ah Muwaadiniinta dalka ee tiradooda guud dhan tahay 109 million oo qof ayaa waxay maanta u codeynaya Doorashadii Guud ee 6-aad ee dalkaasi ka qabsoonto, taasi oo loo arko inay tijaabo u tahay RW Abiy Ahmed oo Talada dalkaasi hayey tan iyo sanadkii 2018-kii.
Cod-bixintaasi oo bilaabantay 6-dii Aroornimo ee maanta oo Isniin ah ayaa waxa ka qeyb galayo in ka badan 40 Xisbi oo ka tirsan Barlamaanka dalkaasi iyo Murashixiin tiradooda dhan tahay 9,500 oo Murashax.
Gooboogayaasha Caalamiga iyo kuwa Maxaliga iyo Warbaahinta ayaana ku sugan goobaha Cod-bixinta ee dalkaasi.
Dhinaca kale, Wareega Labaad ee Cod-bixinta Guud ee dalkaasi waxaa la qaban doona bisha September 6-da ee sanadkan 2021-ka, iyadoo ay ka qeyb geli doonaan dadka ku nool Dowlad-gobaleedyada Soomaalida, Amxaarada iyo kiwi kale oo aan maanta laga codeyn doonin.
Gobalka Tigrayga ee Waqooyiga dlakaasi wax taariikh ah looma qabanin xilliga ay Doorashadu ka dhici doonto, iyadoo ay Hay’adaha QM sheegeen injay 350,000 oo qof oo ku nool Gobalkaasi ay soo wajahday Xaalad Macluul ah.
Diplomaasiyiinta ayaa rumeysan in Doorashadan oo ah tii ugu hjoreysay oo tijaabo u ah qaabka uu RW Abiy Ahmed u maareeyo Dib-u-habaynta Nidamka Dimuqraadiga iyo Dhaqaalaha dalkaasi.
Maqaal horeLafta-gareen oo balan qaaday inay furayaan waddooyin ay xireen Al-shabaab
Maqaal XigaPuntland oo Maanta xukun kale ku riday Nin horey loo Maxkamadeeyay